Apple Watch Series 7: lehibe kokoa, matanjaka kokoa, mitovy ny | Vaovao IPhone
Apple Watch Series 7: lehibe kokoa, henjana, mitovy kokoa
Luis Padilla | 18/10/2021 11:53 | Nohavaozina amin'ny 18/10/2021 11:55 | Apple Watch, maro
Notsapainay ny Apple Watch Series 7, manokana ny maodely vy amin'ny loko grafit misy fifandraisana LTE. Fijerena lehibe kokoa sy famafana haingana kokoa… mendrika ny fanovana ve izany? Miankina amin'izay anananao amin'ny tananao.
Ny tsaho momba ny Apple Watch momba ny ho avy dia manomboka amin'ny fotoana nanombohana ilay maodely vaovao, ary mandritra ny herintaona dia misy fotoana ireo fijaliana maro izay lasa mivadika fahadisoam-panantenana. Tamin'ity taona ity dia nanantena izahay fa hisy fiovana amin'ny famolavolana, ao anatin'izany ireo sensor vaovao handrefesana ny haavon'ny mari-pana sy ny glucose amin'ny rà, eny fa na ny tosidra aza dia ho fehezin'ny Apple Watch. SAINGY ny tena izy dia ny Apple Watch dia nahatratra fahamatorana avo lenta ka ny fanovana dia efa tonga amin'ny dropper, ary ity taona ity dia manamafy izany.
1 Habe vaovao, famolavolana mitovy
2 Mahazaka kokoa
3 Fiampangana haingana
4 Loko vaovao fa loko tsy hita
5 Ny ambiny tsy miova
6 Manamarina azy rehetra ny efijery
Habe vaovao, famolavolana mitovy
Ny zava-baovao ateraky ny Apple Watch vaovao dia ny habeny lehibe kokoa amin'ny maodely roa. Miaraka amin'ny fiakarana kely amin'ny habeny ankapobeny, Apple dia afaka nampitombo ny haben'ny fampisehoana amin'ny maodely roa, mampihena ny bezel amin'ny teboka izay mipaka hatrany amin'ny sisin'ny vera, izay tena tsikaritra indrindra izany rehefa mahita sary feno na mampiasa ny sehatra vaovaony isika, natokana ho an'ny Series 7. Ny efijery dia mahatratra 20% lehibe kokoa noho ny amin'ny Series 6, ary na dia toa toa tsy azo tsinontsinoavina aza ny fanovana, amin'ny tena izy dia toa mbola lehibe kokoa aza.
Mampiasà fampiharana toa ny Calculator, ny diosezy Contour sy Modular Duo (manokana), na koa ny klavie feno vaovao (tsy miankina ihany koa) dia manasongadina ity haben'ny efijery lehibe kokoa ity. Mampiseho be dia be ... na dia tsy misy fanamarinana aza ny antony tsy ananan'izy ireo ihany koa amin'ny maodely teo aloha, satria raha misy andiany 7 an'ny 41mm afaka manana azy ireo dia afaka manana andiany 6 an'ny 44mm ihany koa. Mahamenatra ireo karazana fanapahan-kevitra ireo, satria Apple Watch (Series 6) efa herintaona dia efa lany rindrambaiko vaovao ary tsy mahasoa ilay fitaovana.
Ankoatry ny fanovana habe azy dia mihamazava ny efijery (hatramin'ny 70%) rehefa tsy miasa izy, raha mbola manana ny safidy "Screen foana ianao". Raha mbola tsy nanandrana an'ity safidy an'ny Apple Watch ity ianao dia azo antoka fa tsy hanome lanja azy io ianao, fa vantany vao azonao izany dia tsapanao fa tena azo ampiharina Satria mamela anao hanamarina ny fotoana izany eo am-panoratanao lahatsoratra toy izao, nefa tsy mila manandratra ny tananao amin'ny fitendry ianao ary mametaka ny tananao. Io fanovana ny famirapiratana io dia manatsara an'io fampiasa io ary manao izany (amin'ny teôria) nefa tsy misy fiatraikany amin'ny fizakantenan'ny fiambenana, mahafinaritra tokoa.
Manohy miresaka momba ny efijery famantaranandro isika, iray amin'ireo faritra marefo indrindra aminy. Apple dia miantoka izany ny vera eo alohan'ny Apple Watch dia mahazaka tohina kokoa, noho ny famolavolana vaovao miaraka amina fotony, ankoatry ny fanamarinana ny famantaranandro ho mahatohitra vovoka IP6X, izay manome azy fiarovana tanteraka. Apple dia mbola tsy nanamarina ny famantaranandrony tamin'ny fanoherana ny vovoka, noho izany dia tsy fantatray ny fahasamihafana raha ampitahaina amin'ny taranaka teo aloha. Mikasika ny fanoherana ny rano dia manohy manana halalin'ny 50 metatra isika, tsy nisy fiovana io lafiny io.
Apple Watch dia mbola manana varavarankely hafa eo aloha miankina amin'ny maodely Sport na modely vy. Raha ny maodely Sport dia manana vera IonX izy izay mahatohitra fatratra ny hatairana, tsy mahazaka soritra, raha ny maodely vy an'ny kristaly dia vita amin'ny Safira, mahatohitra mafy ny fikolokoloana, saingy tsy mahazaka tohina. Raha ny zavatra niainako dia miahiahy bebe kokoa amin'ny ratra amin'ny vera aho noho ny vongan-dranomaso, ary izany indrindra no iray amin'ireo antony nisafidianako ilay maodely vy indray aorian'ny herintaona niaraka tamin'ny Aluminium Series 6.
Ny famerenam-bola haingana dia lafiny iray hafa ifantohan'ny fanatsarana ny Apple Watch Series vaovao 7. Tianay kokoa ny hampitombo ny fizakantena mandra-pahatongantsika hahatratra roa andro nefa tsy mila mamerina azy io intsony, saingy mila milamina amin'izany izahay mila fotoana kely kokoa hamerenana amin'ny laoniny. Misy zavatra tsara kokoa noho ny tsy misy. Izany dia hanamora ny fahafahanao manao azy mandritra ny alina hanaraha-maso ny torimaso ataontsika ary amin'ny maraina dia toy ny famantaranandro fanairana izy io.. Araka ny voalazan'i Apple, azontsika atao ny mamerimberina ny Series 7 hatramin'ny 30% haingana kokoa noho ny Series 6, manomboka amin'ny zero hatramin'ny 80% ao anatin'ny 45 minitra, ary ny 8 minitra famerenana indray (rehefa miborosy nify isika) dia manome mandritra ny alina ny fanaraha-maso torimaso.
Hatramin'ny nanombohan'i Apple ity torolàlana vaovao natory tao amin'ny Apple Watch ity, dia zatra namerina azy indroa isan'andro aho: rehefa mody amin'ny alina aho rehefa manomana sakafo hariva ary mandra-hatory, ary amin'ny maraina rehefa mandro. Amin'ity fiampangana haingana ity dia ho vitako ny mametraka ny famataranandro eo amin'ny tanako aloha amin'ny alina, tsy miandry ny hatory ... raha mbola tadidiko, izay tsy dia fahita firy. Angamba miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana io fiampangana haingana io dia hanaporofo fa tena ilaina tokoa, fa amin'izao fotoana izao dia tsy mino aho fa fiovana lehibe io. amin'ny fahazaran'ny maro an'isa.
Raha te hampiasa famandrihana haingana dia ilaina ny mampiasa tariby charger vaovao misy mpampitohy USB-C izay tafiditra ao anaty boaty Apple Watch, ary charger izay tsy maintsy manana herinaratra famahanana 18W na hifanaraka amin'ny Power Delivery raha izany dia ampy ny 5W. Ny charger Apple 20W mahazatra dia mety indrindra amin'izany, na charger hafa avy amina mpanamboatra azo itokisana izay ho hitantsika amin'ny Amazon amin'ny vidiny ambany (toa izao). Etsy andaniny, ny base MagSafe an'ny Apple izay mitentina € 149 dia tsy mifanaraka amin'ny famahanana haingana, antsipirihany lehibe.
Loko vaovao fa loko tsy hita
Tamin'ity taona ity Apple dia nanapa-kevitra ny hanova ny gamut loko an'ny Apple Watch amin'ny fomba lehibe, ary nanao izany tamin'ny fanapahan-kevitra izay tsy tian'ny rehetra. Amin'ny tranga misy ny aluminium Apple Watch Sport, Tsy manana volafotsy na volondavenona intsony isika, satria i Apple dia nanampy kintana fotsy (izay fotsy-volamena) sy sasakalina (manga-mainty) hisolo azy ireo. Izy io dia mitazona ny mena sy ny manga, ary manampy koa fomba maizina maitso mavana izay tiana be. Raha nisafidy aliminioma aho tamin'ity taona ity dia mieritreritra aho fa hijanona amin'ny misasakalina, saingy tsy misy ny loko mandresy lahatra ahy.
Angamba izany no nahatonga ahy handeha ho amin'ilay maodely vy, izay efa nanenjika ny lohako hatramin'ny nahalalako ny loko farany. Amin'ny vy dia misy amin'ny volafotsy, volamena ary grafita izy io (satria ny habaka mainty dia voafetra amin'ny fanontana Hermes izay tsy azon'ny ankamaroan'ny ankamaroany). Ny vy dia miteraka ahiahy be dia be amin'ireo izay mieritreritra izany noho ny fomba hizorany ny fandehan'ny fotoana, saingy mitazona tsara lavitra noho ny aluminium izy io. Ary lazaiko izany taorian'ny nahazoako Apple Watch roa tamin'ny vy ary roa tamin'ny alimo.
Ary farany, manana ny safidin'ny Apple Watch amin'ny titane isika, miaraka amin'ny loko mainty sy loko titanium izay tsy maharesy lahatra ahy, izany no antony nisafidianako vy, izay mora ihany koa.
Ny ambiny tsy miova
Tsy misy fiovana intsony amin'ny Apple Watch vaovao. Ny haben'ny efijery lehibe kokoa miaraka amin'ny famirapiratana bebe kokoa amin'ny tsy miasa, ny fanoherana bebe kokoa ny fitaratra eo aloha ary ny fiampangana haingana izay tsy hitako loatra ampiasaina amin'izao fotoana izao. Tsy niresaka momba ny hery na ny hafainganam-pandeha bebe kokoa aza isika rehefa manao asa, satria tsy misy. Ny processeur izay misy an'ity Series 7 vaovao ity dia mitovy amin'ny Series 6, izay etsy andaniny miasa tena tsara na dia miaraka amin'ny rafitra fiasa farany farany aza, ny watchOS 8, saingy mitovy ihany izy io. Ny sasany amintsika dia nanantena dingana kely mankany amin'ny fahaleovan-tena amin'ny iPhone, fa tsy izany.
Tsy misy koa ny fanovana sensor, tsy misy endrika ara-pahasalamana, tsy misy fanaraha-maso torimaso, ary tsy misy fiasa vaovao, satria tsy misy. Raha apetratsika ireo dial vaovao dia tsy misy endri-javatra miavaka amin'ny Andiany 7, fa tsy hoe satria tafiditra ao amin'ny hafa izy ireo, saingy satria tsy misy zava-baovao. Ny Apple Watch dia vokatra boribory be, na amin'ny endriny na amin'ny asa fanaraha-maso ara-pahasalamana sy fanatanjahantena. Ny fandrefesana ny tahan'ny fo, ny fahitana ny gadona tsy ara-dalàna, ny refy mahasalama ny oxygen ary ny fahombiazan'ny EKG dia nametraka ny bara avo be, avo loatra ka na i Apple aza tsy naharesy azy tamin'ity taona ity, nijanona teo amin'izay nisy azy. Azonao atao ny mividy azy amin'ny € 429 (aluminium) ao amin'ny Apple sy Amazon (rohy)
Manamarina azy rehetra ny efijery
Apple dia nanangana smartwatch vaovao izay nandefasan'izy ireo ny zava-drehetra amin'ny efijery mahavariana, tsara tarehy ary mamiratra. Tena mahavariana izy io raha vantany vao esorinao ao anaty boaty ilay izy ary alefanao ny famantaranandro voalohany. Ny fiovan'ny habeny sy ny fitomboan'ny velaran'ny efijery saika hatramin'ny sisiny indrindra dia manao azy ho famantaranandro lehibe kokoa noho ny teo alohany, na dia zara raha nampitombo ny habeny aza. Fa izay ihany, tsy misy vaovao azo lazaina momba ity Series 7 ity, farafaharatsiny tsy misy vaovao izay tena misy ifandraisany.
Ny Apple Watch no smartwatch tsara indrindra eny an-tsena, lavitra ny faharoa, ary na ny fiatoana amin'ity taona ity aza dia tsy hampihena ny elanelana io. Ny fanapahan-kevitra hividy Apple Watch Series 7 dia tsy maintsy raisina amin'ny fijerena izay anaovanao izao eo am-pelatananao. Io ve no Apple Watch voalohany anao? Ka hahazo ny smartwatch tsara indrindra azonao vidina dieny izao. Efa manana Apple Watch ve ianao? Raha nanapa-kevitra ny hanova azy ianao dia tohizo. SAINGY Raha nanana fisalasalana ianao, ity Series 7 vaovao ity dia tsy hanome anao antony marobe hamafana azy ireo ho azy.
Navoaka tamin'ny: 18 Oktobra amin'ny 2021
Fanovana farany: 18 Oktobra amin'ny 2021
Fanoherana lehibe kokoa
Fomba fiasa mitovy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Apple Watch Series 7: lehibe kokoa, henjana, mitovy kokoa
8 minitra hanosorana ny nifintsika…. Diso zavatra ataoko X)
Nikatona ny fivarotana an-tserasera! Akaiky ny hetsika Mac
Apple dia manohy manaisotra fampiharana amin'ny alàlan'ny fangatahan'ny governemanta sinoa